Archive du 20191104
Onitra ho an`ny Tanà-Masoandro Vola avy aiza marina ilay “20 tapitrisa dolara” ?
Andro vitsy lasa izay dia noraviraviana vola ny mponina etsy Ambohitrimanjaka. Taorian` ny fisokafan’ilay« guichet unique » etsy amin`ny Village Voara izay, efa maherin` ny 300 ireo
Haja Andrianavony Porofoiny amin’ny asa ny fahavononany hitantana an’i Moramanga
Andrianavony Haja no natolotry ny Tiako i Madagasikara (TIM) ho Ben’ny Tanàna ao amin’ny Kaominina Ambonivohitra Moramanga, Alaotra Mangoro.
Loza tampoka tany Ambatolampy Tsaboina any La Réunion ny minisitry ny Atitany
Nifanindran-dalana tamin’ny fahalasanan’ny mpanakanto Dadah tao amin’ny tarika Mahaleo dia fantatra ihany koa omaly alahady fa nalefa niatrika fitsaboana maika atsy amin’ny nosy La Reunion
Basikety Iraisam-pirenena Tafita amin’ny dingana manaraka avokoa ny ekipa Malagasy
Nandresy fanindroany indray tamin’ny zoma 01 novambra 2019, teo amin’ny fifanintsanana CCCOI “Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien
Tsy maintsy hatrehina
Mba mandina kely aloha ny renivohitr’i Gasikara fa nirotsaka ny orana tamin’ny faran’ny herinandro.
Ambositra Vadina filohana andrim-panjakana namono olona
Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray tany Lajaky-Ambositra ny sabotsy teo tokony ho tamin’ny 01 ora folakandro.
Kaompania Air Madagascar Ilaina ny fividianana firamanidina vaovao
Tokony hitady vahaolana hatrany ho an’ny kaompania nasionaly Air Madagascar ireo tompon’andraikitra satria io no mitondra ny fanevan’ny firenena.
Fametrahana ny e-visa Hisintonana mpizaha-tany
Hampitomboana ireo mpizaha-tany ho avy eto Madagasikara no antony hampiasana sy hikirakirana ny e-visa na ny visa elektronika.